कति मजबुत छन् मोदी ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
कति मजबुत छन् मोदी ?
२०७५ चैत्र २७ गते बुधवार
केही महिनाअघिसम्म भाजपा नेतृत्वको एनडिए सरकारलाई कांग्रेसले चुनौती दिनसक्ने अनुमान गरिँदै थियो । गतवर्ष कांग्रेसले तीन राज्यको विधानसभा निर्वाचन जितेको हुनाले कांग्रेसको अवस्था सुध्रिँदै गएको मानिँदै थियो । तर, पुलवामा आक्रमणपछि अब २०१९ को समीकरण फेरिँदै गएको देखिन्छ । राष्ट्रवादको घोडामा सवार भाजपाले पुलवामा आक्रमणपछि चुनावी समीकरण आफ्नो पक्षमा पारेको छ । कम्तीमा पनि हिन्दीभाषी राज्यहरुमा उसले आफ्नो घाटा कम गरेको छ । र, कांग्रेसका साथमा अन्य क्षेत्रीय पार्टीलाई पनि आआफ्ना रणनीतिमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।
पुलवामा आक्रमणअघि पनि भाजपा २०१९ को निर्वाचनको रेसमा अगाडि नै थियो । तर, पुलवामापछि भाजपा हिन्दीभाषी राज्यहरूमा कांग्रेस र अन्य क्षेत्रीय पार्टीभन्दा थोरै अगाडि पुगेको छ । बालाकोट एयर स्ट्राइकबाट भाजपा सरकारको पाकिस्तानलाई जबाफ दिन सक्ने छवि बन्यो । साथै, जनताले नरेन्द्र मोदीको विकल्प नदेख्नुले पनि भाजपालाई फाइदा भइरहेको छ । पुलवामापछि मोदी थप मजबुत देखिइरहेका छन् । उनको खस्किँदै गएको लोकप्रियता पुनः उक्सिँदै गएको छ ।
२०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले कैयौँ क्षेत्रमा निकै ठूलो अन्तरको जित हात पारेको थियो । भाजपालाई यी सिटमा त्यतिखेर मात्र हराउन सकिन्छ, जब कुनै ठूलो नकारात्मक भोट विपक्षीको खातामा जानेछ । भाजपाले ४२ लोकसभा सिटमा तीन लाखभन्दा पनि बढी मतान्तरबाट जित हासिल गरेको थियो । र ७५ सिटमा दुई लाखभन्दा बढी अन्तरमा जित हात पारेको थियो । ३८ सिटमा डेढ लाखको अन्तर थियो भने ५२ सिटमा एक लाखभन्दा बढी मतको अन्तर थियो । विपक्षी पार्टीहरूले २०१९ मै यति ठूलो अन्तर घटाउन सम्भव छैन । जबसम्म सत्ताधारी भाजपासित आममतदाता रुष्ट हुनेछैनन् तबसम्म यो सम्भव छैन । पुलवामा घटनाअघिसम्म मतदाता भाजपाविरुद्ध आक्रोशित थिए । तर, परिस्थिति बदलिएको छ ।
सबै परिस्थिति र आँकडाले २०१९ मा नरेन्द्र मोदीलाई हराउन लगभग असम्भव छ भन्ने संकेत गरेका छन्
हिन्दीभाषी राज्यहरूमा भाजपालाई नोक्सान हुन सक्छ । यहाँ दुईतर्फी प्रतिस्पर्धा छ । यी राज्यमा भाजपाले २०१४ मा भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नेछैन । तर, भाजपालाई गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान, हिमाञ्चल प्रदेश, मध्य प्रदेश र उत्तराखण्डमा कुनै नाटकीय मोड नआएको खण्डमा ठूलो नोक्सानी हुनेछैन । मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढको विधानसभा निर्वाचनमा भोगेको हारपछि पनि भाजपा मध्यप्रदेश र राजस्थानमा कांग्रेसभन्दा थोरै फाइदामै देखिन्छ । यी विधानसभा निर्वाचनको मतलाई संसदीय निर्वाचनमा परिणत गर्ने हो भने मध्यप्रदेशमा भाजपा १८ लोकसभा सिटमा अगाडि छ भने कांग्रेस ११ मा । उता राजस्थान विधानसभा मतलाई संसदीय निर्वाचनका आधारमा हेर्दा भाजपा १३ र कांग्रेस १२ सिटमा अगाडि छन् । मात्र छत्तीसगढमा कांग्रेस निर्णायक स्थितिमा छ । यद्यपि, यहाँ पनि पुलवामापछि भाजपाको सेयर बढ्ने सम्भावना छ ।
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पञ्जाब, हरियाणा, झारखण्ड, जम्मु, कस्मिर र दिल्लीमा भाजपाको स्थिति राम्रो छ । यी राज्यमा भाजपाले या त क्षेत्रीय पार्टीहरूसित गठबन्धन गरेको थियो, या क्षेत्रीय पार्टीहरू बाँडिएका थिए । जसका कारण भाजपालाई फाइदा नै भएको थियो । विपक्षी गठबन्धनले भाजपालाई कैयौँ राज्यमा पछाडि पार्न सक्छ । तर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पञ्जाब, झारखण्ड, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहारलगायत राज्यमा विपक्षी गठबन्धनले एनडिएलाई कुनै घाटा पु¥याउन सक्दैन । कांग्रेसले कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड, महाराष्ट्र, बिहारलगायत राज्यमा गठबन्धन गरेको छ, तर, यो भाजपालाई चुनौती दिन पर्याप्त छैन ।
पश्चिम बंगाल र ओडिसामा २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाको प्रदर्शन त्यति राम्रो थिएन । तर, विगतमा जस्तै २०१९ मा पनि विपक्षी विभाजित भइरहे भने भाजपालाई यहाँ बलियो हुने राम्रो अवसर छ । पछिल्ला केही वर्षका सर्भे यर्सतर्फ इसारा गरिरहेका छन् । सर्भेहरू भन्छन्— भाजपा पछिल्ला केही वर्षमा यी राज्यमा पनि पहिलेभन्दा बलियो भएको छ । विपक्षीले गठबन्धन गरेनन् भने भाजपाका लागि यी राज्यमा सहज हुनेछ । दक्षिण तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश र तेलंगानामा भाजपाको स्थिति करिबकरिब २०१४ को जस्तै छ । केरलमा चाहिँ भाजपाको समर्थन बढेको छ । तर, यो नै लोकसभामा सिट जित्न पर्याप्त छैन । यी सबै परिस्थिति र आँकडाले २०१९ मा नरेन्द्र मोदीलाई हराउन लगभग असम्भव छ भन्नेतर्फ नै संकेत गरेका छन् ।
(प्राध्यापक कुमार सेन्टर फर स्टडी अफ डेभलपिङ
सोसाइटीका निर्देशक हुन्)
फेरि लकडाउन घोषणा, स्कुल तीन साताका लागि बन्द
वैध मत गनिए आफूले जित्ने ट्रम्पको दाबी
माेदी सरकारले प्रतिशोध साँधेपछि एमनेस्टीद्वारा काम बन्द गर्ने घोषणा
पर्यटन उद्योग पुनः सुरु गर्दै थाइल्यान्ड
भारतीय सीमा रक्षासँग सम्बन्धित सूचना चिनियाँ सरकारलाई दिएकाे आराेपमा एक नेपालीसहित ३ जना पक्राउ
कोरोनाः विश्वमा नौ लाख ४५ हजार भन्दा बढीको मृत्यु